XOG CUSUB: wariye BBC-da ka tirsanaa isla markaana soo noqday Madaxa laanta afka soomaaliga ee BBC-da oo ka mid ah wasiirada cusub | Xaqiiqonews
XOG CUSUB: wariye BBC-da ka tirsanaa isla markaana soo noqday Madaxa laanta afka soomaaliga ee BBC-da oo ka mid ah wasiirada cusub
Warar si hoose u soo gaaray xafiiska warqabadka shabakadda xaqiiqonews ayaa sheegaya in la saadaalinaayo in wariyihii hore ee BBC da ahaana madaxii hore ee laanta afka soomaaliga ee BBc-da cabdiraxmaan kotonto uu ka mid yahay dadka xusul duubka ugu jira si ay ugu mid noqon lahaayeen wwasiirada cusub.
wariyahan oo ka soo jeeda Gaaljecel bees ayaa doonaya in uu jakada kula tartamo ninka lagu magacaabo Maxamed Mukhtaar oo ah gaaljecel Doqondiide isla markaana ka mid ah wasiirada waqtigooda dhamaaday.
Ex wariye KORONTO ayaa hadda rajo ka qabo in uu taageero ka helo beeshiisa gaalejecel si uu mar un ugu soo muuqdo siyaasadda soomaaliya .
wariyahan ayaa si iskiis ah iska casilay shaqadii uu ka haayey BBcda sanadkii la soo dhaafay.
WIXII WARAR AH EE KU SOO KORDHA KALA SOCO XAQIIQONEWS